Mahashivratri Vrat Katha In Nepali पढनुहोस् महाशिवरात्रिको पवित्र, प्राचीन र प्रामणिक कथा - Nepal Nepali
Mahashivratri Vrat Katha in Nepali पढनुहोस् महाशिवरात्रिको पवित्र, प्राचीन र प्रामणिक कथा
केही समयपछि एक अरु हिरणी female deer त्यताबाट निकलियो । शिकारी को प्रसन्नता का ठेगाान रहेन । समीप आएपछि उनले धनुषमा बाण चढायो। तब उनलाई देख्यो कि हिरणी ले विनम्रतापर्ूवक निवेदन गरेे, ‘हे शिकारी! मं थोरै समय पहिले ऋतु ले निवृत्त भएकी छु। कामातुर विरहिणी हुँ । आफनो प्रिय को खोजमा भटकी रहेको छु। म आफनो पति सँग मिलेर शीघ्र नै त्रि्रो छेउमा आइहाल्नेछु। ‘
शिकारी (hunter) लेे उनलाई पनि जान दियो । दर्ुइ पटकशिकार लाई गुमाएर उसको टाउको तात्यो । ऊ चिन्तामा पर्न गयो । रात्रि को आखिरी प्रहर बीतिरहेको थियो । यसपटक पनि धनुषले लागेरकेही बेलपत्र शिवलिंगमा गएर झरयो तथा अर्को प्रहर को पूजन पनि सम्पन्न भइसक्यो।
तब एक अन्य हिरणी आफनो बच्चाहरुको साथ त्यताबाट निकलियो । शिकारी को लागि यो स्वणिर्म अवसर थियो । उनले धनुषमा तीर चढाउनुमा ढिलो गरेन। ऊ तीर छोडनै लाग्दावाला थियो कि हिरणी बोलिन्, ‘हे शिकारी!’ म यी बच्चाहरुलाई यसको पिता लाई दिएर फर्केर आउनेछु। यस समय (time) मलाई नमार ।
शिकारी (hunter) हांस्यो र बोल्यो, सामुन्ने आएको शिकार लाई छोडी दिउँ, म यस्तो मर्ूख होइन । यसभन्दा पहिले मैं दर्ुइ पटक आफनो शिकार गुमाइसकेको छु। मेरो बच्चाहरु भोक-प्यास ले व्यग्र भइरहेको हुनेछ । उत्तरमा हिरणी ले पुनः भनिन्, जसरी तिमीलाई आफनो बच्चाहरुको ममता सताइरहेको छ, ठीक त्यसरी नै मलाई पनि । हे शिकारी! मेरा विश्वास गर, म यिनलाई यिनको पिता को छेउमा छोडेरतुरुन्त फर्केने प्रतिज्ञा गर्छर्ुु . हिरणी का दीन स्वर सुनेर शिकारीलाई त्यसमा दया आयो । उनले त्यस मृगलाई पनि जान दियो । शिकार को अभावमा तथा भोक-प्यासले व्याकुल शिकारी अनजानमा नै बेल-वृक्षमा बसेको बेलपत्र टिपी टिपीकन तल फाल्दै जा रहा थियो । विहान हुन लाग्दा एक हृष्ट-पुष्ट मृग deer त्यही बाटोमा आयो । शिकारी ले सोच्योकि यसका शिकार ऊ अवश्य गर्नेछ ।
शिकारी (hunter) को तानिएको वाण देखेर मृग विनीत स्वर माबोल्यो, हे शिकारी! यदि तिमीले मभन्दा पर्ूव आउनेबाला तीन हरिणहरु तथा सानोसानो बच्चाहरुलाई मारिसकेको छ, भने मलाई पनि मार्नुमाविलंब नगर, ताकि मलाई उनको वियोगमा एक क्षण पनि दुख सहन नपरोस् । म ती हिरणिहरुको पति हुँ । यदि तिमीले उनीहरुलाई जीवनदान दिएको छौ भनेमलाई पनि केही क्षण को जीवन दिने कृपा गर । म उनीहरुसँग मिलेर त्रि्रो समक्ष उपस्थित भइहाल्नेछु।
मृगको कुरा सुन्नासाथ शिकारी (hunter) को सामुन्ने पूरा रात (night) का घटनाचक्र घुम्यो, उनले सारा कथा मृगलाई सुनाई दियो । तब मृग ले भने, ‘मेरो तिनै पत्निहरुजुन प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध भएर गएका छने, मेरो मृत्युले आफनो धर्म को पालन गर्न पाउदैनन। अतः जसरी तिमीले उनीहरुलाई विश्वासपात्र मानेर छोडे, त्यसरी नै मलाई पनि जान देऊ। म ती सबैको साथ त्रि्रो सामुन्नेशीघ्र नै उपस्थित हुन्छु। ‘
शिकारी (hunter) ले उनलाई पनि जान दियो । यस प्रकार प्रातस् भइसक्यो । उपवास, रात्रि-जागरण तथा शिवलिंग shivlinga मा बेलपत्र चढनाले अनजानमा नै शिवरात्रि को पूजा पर्ूण्ा भइसक्यो। अनजानमा नै गरिएको पूजन का परिणाम उनलाई तत्काल मिल्यो । शिकारी का हिंसक हृदय (Heart) निर्मल भयो । उसमा भगवद्शक्ति का वास भयो ।
केही समयपछिऊ मृग deer सपरिवार शिकारी को समक्ष उपस्थित भयो , ताकि ऊ उनको शिकार गर्न सकून ।, तर जंगली पशुहरु (animals) को यस्तो सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेमभावना देखेर शिकारी लाई ठूलो ग्लानि भयो । उनले मृग परिवार लाई जीवनदान दिइहाले ।
maha shivratri story to be continued…
#Mahashivratri Vrat Katha, Mahashivratri Vrat Katha in Nepali, Mahashivratri Vrat Story in Nepali, Shivratri Vrat Katha in Nepali